ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ဘယျအသငျးက ကစားသမားတဈဦးတညျးကို အမှီပွုရဆုံးအသငျးလဲ? – Play Maker Sports Journal
ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ဘယျအသငျးက ကစားသမားတဈဦးတညျးကို အမှီပွုရဆုံးအသငျးလဲ?
ဟယျရီကိနျးဟာယခုရာသီမှာစပါးဈအသငျးရဲ့ဂိုး၃၀ရရှိရာမှာပါဝငျနပွေီးစပါးဈအသငျးရရှိတဲ့ဂိုးအား လုံးရဲ့၆၁.၂ရာခိုငျနှုနျးအထိပါဝငျပတျသကျနပေါတယျ။စပါးဈဟာယခုရာသီမှာ၄၉ဂိုးရရှိထားပွီးယငျးမှ ဂိုး၃၀ရရှိရာမှာဟယျရီကိနျးပါဝငျနတောပါ။ကိနျးဟာ၁၇ဂိုးသှငျးပွီး၁၃ကွိမျဖနျတီးထားပါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဘယ်အသင်းက ကစားသမားတစ်ဦးတည်းကို အမှီပြုရဆုံးအသင်းလဲ?
ဟယ်ရီကိန်းဟာယခုရာသီမှာစပါးစ်အသင်းရဲ့ဂိုး၃၀ရရှိရာမှာပါဝင်နေပြီးစပါးစ်အသင်းရရှိတဲ့ဂိုးအား လုံးရဲ့၆၁.၂ရာခိုင်နှုန်းအထိပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။စပါးစ်ဟာယခုရာသီမှာ၄၉ဂိုးရရှိထားပြီးယင်းမှ ဂိုး၃၀ရရှိရာမှာဟယ်ရီကိန်းပါဝင်နေတာပါ။ကိန်းဟာ၁၇ဂိုးသွင်းပြီး၁၃ကြိမ်ဖန်တီးထားပါတယ်။